ကမျြးစာကိုအန္တိခရစ်ထုတ်ဖော်ပြသ | Apg29
ငါသည်အန္တိခရစ်သူသည်ကျော်ရှုပ်ထွေးမှုများရှိကွောငျးယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာရှင်းလင်းစွာသင်တို့သည်ဤလေးမျိုးကျမ်းပိုဒ်များတွင်တွေ့မြင်သောအန္တိခရစ်, ကိုဖော်ပြထားတယ်:
1 ယော 2:18 ။ ချစ်သားတို့, ယခုနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည်ထိုစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီအဖြစ်နှင့် အန္တိခရစ်လာကြလိမ့်မည် အဖြစ်ကိုလည်းပြီးသားဖြစ်ပါတယ် အများအပြားအန္တိခရစ် လာကြပြီ။ ဒီကနေကျွန်တော်နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်ပါသည်နားလည်ပါသည်။
1 ယော 2:22 ။ အဘယ်သူသည်မုသာကိုသုံးသောသူကားအဘယ်သူ ယေရှုသည်ခရစ်တော်မဟုတ်ဟုငြင်းပယ် ? ထိုသို့ အန္တိခရစ် အဘယ်သူသည် ခမည်းတော်နှင့်သားတော်ကိုငြင်းပယ်။ သားတော်ကိုငြင်းပယ်တဲ့သူ 23. လူတိုင်းမညျးတျောကိုမရရှိပါတယ်။ အကြင်သူသည်သားတော်ကိုဝန်ခံလည်းမညျးတျောကိုရှိပါတယ်။
1 ယောဟန် 4:3။ သို့သော် သခင်ယေရှုခရစ်တော်လူဇာတိအားဖြင့်ကြွလာတော်မူကြောင်းဝန်ခံပါဘူးသောဝိညာဉ် တော်မူသောဘုရားသခင်၏မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ အန္တိခရစ်ဖြစ်၏ သင်ကြားရသောကြောင့်, လာမယ့်ခဲ့သည်နှင့်ကမ္ဘာထဲမှာပြီးသားယခုဖြစ်ပါတယ်။
2 ယော 1:7အများအပြားလှည့်စားဘို့သူအများတို့သည်ဤလောကသို့သွားကြပြီ ယေရှုခရစ်ကိုလူဇာတိအားဖြင့်ကြွလာတော်မူသည်ကိုမဘော်ပြတောင်းပန် ။ ထိုသို့သော ဖြစ်ပါတယ် လှည့်ဖြားခြင်းနှင့် အန္တိခရစ် ။
အန္တိခရစ်ယရှေုသညျမဟုတ်ဟုငြင်းပယ် ဖြစ်ပါတယ် ခရစ်တော်တည်းဟူသော။
အန္တိခရစ်ယရှေုသညျမဟုတ်ဟုငြင်းပယ် ဖြစ်ပါတယ် ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို။
V 08, lördag 27 februari 2021 kl 07:27